INTOMBAZANA KWINTO EYIYO UDLIWANONDLEBE OLUHLE WELEGO - ISINI
Izitudiyo Zomdlalo We-Bethesda
Ndifuna Urenta Ndifownele Mhlawumbi
Ngaba le ntombazana ikweyona ntengiso ye-Intanethi idumileyo yeVintage icinga ntoni ngayo ngoku?
Le ntengiso ye-1981 yeeseti zeLego inikwe ubomi obuhlaziyiweyo ekuphenduleni kumgca we-Lego's Friends, umgca weemveliso zeLego ezisele kuphela ezithengiswayo kumantombazana, kunye nee-minifigure ezingahambelaniyo nezinye iimveliso zeLego. Kuyabonakala ukuba oku kugqithisile URachel Giordano , ugqirha we-naturopathic oneminyaka engamashumi amathathu anesixhenxe owayekhe wayintombazana encinci eboniswe kwintengiso. Abasetyhini Ufanele Ukwazi.net ukulandelela uGiordano ukuya kudliwanondlebe naye kunye nokuphinda wenze ifoto kunye neseti yaBahlobo yangoku (iindaba zekastini yevan leyo ingaphakathi iqulethe, hayi izixhobo zosasazo, kodwa into engeloncedo).
Kuya kufuneka uhambe funda lonke inqaku labo , Echaza iakhawunti kaGiordano yokudala intengiso yoqobo njengemodeli yomntwana, kunye nengxoxo yentengiso yesithoyi sokudlala. UGiordano khange ahoye kakhulu kwiLego kwiminyaka, ke umgca weZitshomi weza njengesothuso.
Ngo-1981, uyacacisa uGiordano, ii-LEGOs zazizii-'Universal Building Sets 'kwaye yiloo nto kanye ababeyiyo… kubafana namantombazana. Izinto zokudlala zimele ukukhuthaza ubuchule. Kodwa kule mihla, kubonakala ngathi iithoyi ezininzi sele zinemiyalezo eyakhelweyo ngaphambi kokuba umntwana avule ipinki okanye umbala oluhlaza. Ngo-1981, ii-LEGO zazilula kwaye zingathathi cala kwezesini, kwaye ubuchule bomntwana bokuvelisa umyalezo. Ngo-2014, yinto eyahlukileyo: into yokudlala ihambisa umyalezo emntwaneni, kwaye lo myalezo uyothusa ngesini.
Yintoni uGiordano ayiphosileyo kumashumi eminyaka angenelele yayiyinto ebalulekileyo kwicandelo likaLego kwikona yabaphulaphuli ngamathoyizi amakhwenkwe. Oku kuthetha ukunxulumana nophawu lwabo oluncinci kunye nemibono engaqondakaliyo njengokuyila kwaye ngokusondeleyo kunye nabaphambukeli bokulwa, iinqwelomoya kwiinqaba, kunye neenkomo; Ubuncinci bezinto ezincinci zabasetyhini; Ukuphelisa abantwana bokwenyani kwiintengiso zabo bekhetha amazwi abantu abadala abangamadoda. I-Lego ihambelana ngokupheleleyo nokwenza imeko apho iithoyi zabo zigcinwe kwiziqithi zamakhwenkwe hayi kwiziqithi zamantombazana kwiivenkile zokudlala. Ingxaki kubo ngoku yenye yeenkampani ezininzi kwishishini lezinto zokudlala ezijongene nazo: zifuna isabelo esikhulu semarike yokudlala yamantombazana.
Qaphela ndathi inkulu. Ezi ziinkampani ezinkulu ezinamacandelo ophando axhaswa ngemali. Bayazi ukuba amantombazana athenga izinto zokudlala ezingamakhwenkwe. Ngenxa yendlela uluntu lwethu oluxabisa ngayo ubudoda kunye nokujongela phantsi ubufazi, amantombazana anendlela elula kakhulu yokwenza izinto zobudoda kunamakhwenkwe anokwamkela imiba yobufazi. Kwaye oko kuthetha ukuba iinkampani zemigca kufuneka zihambe nzima, nangona kungekho gwala: kufuneka bafumane indlela yokwenza iimveliso zeLego zamantombazana ngaphandle kokwenza umbono wokuba iLegos yinto yokudlala yamantombazana. Kungenxa yokuba ukuba into yokudlala ingumfazi obhinqileyo, kude, ambalwa kakhulu amakhwenkwe aya kuyithenga kunamantombazana aya kuthenga iithoyi ezinxulumene nendoda.
Kungenxa yoko le nto, ngokobuqu, ndiyayihlonipha impendulo kaNerf kwintengiso yamantombazana yamathoyizi amakhwenkwe ngaphezulu kakhulu komgca weLego Abahlobo. U-Nerf uthathe uyilo olwaluza kulunga ecaleni kwayo nayiphi na eminye imigca, wayifaka imibala eqaqambileyo ngombala omnyama nomhlophe kunye ne-fuschias kunye ne-sky blues, ngokungathi sithi: ngekhe sazenza ngathi iithoyi zethu azinalo ulwalamano lwesini ngokuthi camoflage Iorenji inxulunyaniswa nokuzingela, kodwa endaweni yoko senza izixhobo zohlobo lweNerf ezintsha zamantombazana nje. Kwaye amagama! Wonke amagama emgceni adibanisa into ethile yobufazi belle, ukukhathazeka kwentliziyo, iswiti, ukutyumza, kunye nokulwa, umatshini wokudlala umdlalo weentsimbi zeNerf. I-Belle iba yi-Rebelle, i-Heartbreak iba yi-Heartbreaker (kwaye ayisiyiyo eyokwaphula intliziyo kuba ungumfazi omhle, oguqukayo, kodwa ngenxa yokuba unesaphetha kwaye uza kudubula umntu osentliziyweni ngayo), I-Sweet iba yimpindezelo emnandi, kwaye Crush… kulungile, crush is crush, kodwa njengakwi Zityumze iintshaba zakho . Umgca weRebelle uthi: Imipu yeNerf yeyamantombazana nayo, kwaye angadlala namakhwenkwe, kanye ngendlela amakhwenkwe adlala ngayo.
Ngakolunye uhlangothi, umgca weentlobo ze-Lego ezibekwe edolophini eyahlukileyo kunabo bonke abanye be-Lego ezibonisa ubomi bokwenene beedolophu zehlabathi. Ii-minifigure zineenxalenye kunye nobukhulu bezandla ezibathintela ekubambeni izinto ezifanayo njenge-Lego minifigures eziqhelekileyo kunye nokutshintsha izixhobo ezifana neenwele okanye i-headgear. Oko kuthethwa ngabahlobo yile: senze iiLegos ezintsha zamantombazana, kuba ezinye iiseti zeLego, nditsho nezo zinobunewunewu obukhulu babafazi ( uharry Potter , umzekelo), ibingamakhwenkwe. Uyakwazi ukuxela, kuba iLegos yamantombazana inelizwe lawo kwaye ayatshintshana ngokwasemfaneni. Amakhwenkwe adlala ngapha. Amantombazana angadlala phaya.
Ngaba yonke le nuance inokulahleka kubantwana abancinci? Kunjalo. Kodwa oko akuthethi ukuba akufuneki sibambe iinkampani ukuba ziphendule, kuba ngokuqinisekileyo azilahlekanga kuzo. Kwaye oko akuthethi ukuba akufuneki sicele iinkampani ukuba zibe nesibindi ngokwaneleyo sokucela umngeni kwiingcinga zoluntu. Sibagcina bephendula ngobuninzi bezinye izigqibo ezingekho mthethweni kodwa ezinenzuzo, emva kwayo yonke loo nto.
imeko kamissouri v celia
Ukuqukumbela, funda lonke inqaku noGqirha Giordano kwabaseTyhini Kuya kufuneka uyazi.net .
inyanga iya kujoyina umanyano lwakho
Umama wedragini wempahla yokunxiba
Umartian manhunter weligi yobulungisa 52
Isishwankathelo sesi-5 se-cowboy bebop
chris pine isigqwetha sokumkani
I-futurama iinguqulelo ziyavukela